China White melamine home office computer desk with 4 úkwù maka ngwá ụlọ ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ngwá ụlọ Manufacturer and Supplier | Yifan
White melamine home office computer desk with 4 úkwù maka ngwá ụlọ ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ngwá ụlọ
Nke a minimalist e mere oche-abịa na 4 úkwù, 1 keyboard tree, na 1 na-emeghe nchekwa shelf nke nwere ike mfe ịnweta gị akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọzọ dị mkpa ihe.
Atụmatụ 4 Drawers, 1 keyboard tree, 1 emeghe shelf
YLỌ Oge a
Isiokwu oge 100x50x75cm
Anyị na-eji gburugburu osisi E1 gburugburu, melamine veneered, enwere ọtụtụ agba maka ntụaka gị, ọcha, ọchịchịrị, aja aja, ukpa, akpu ... ụdị usoro a dị elu, dị mfe ihicha, dịkwa ọkụ, ihe ngosi mmiri , mgbochi ọkọ.
Enwekwara ike iji okpokoro a dị ka tebụl ederede, tebụl ọmụmụ maka akpa, laptọọpụ ma ọ bụ desktọpụ kọmputa.
Site na imepụta dị mfe, ọgbara ọhụrụ, kọmpụta kọmpụta a dabara na obere oghere ọ bụla mana ọ na-enye ọrụ zuru oke. Kwe ka ngwakọta nke oge a dị mfe ma na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ gị, ime ụlọ, ụlọ obibi ma ọ bụ ime ụlọ gị. You nwere ike ịtọlite ​​Kọmputa Kọmputa na ebe ọ bụla.
Thedị kọmpụta na agba ọcha na-enye nnweta mgbanwe - yabụ tinye obere oche ahụ n'ime oghere ma ọ bụ etiti ime ụlọ ma megharia oge ọ bụla masịrị gị.
Tebụl mara mma ma sie ike na-abịa na ọnụahịa dị ọnụ ala nwere njiri mara ntụkwasị obi, na-enye ndị mmadụ ohere ịrụ ọrụ n'ọfịs ụlọ ma ọ bụ obere azụmaahịa.
Gbasaa na laptọọpụ gị, ma ọ bụ rụchaa ọrụ ụlọ na ụlọ na-adịgide adịgide na ụlọ ị ga-echekwa oriọna, onye nbipute ma ọ bụ karịa. Hichaa ebe a na-edobe kọmpụta kọmpụta site na ịchekwa ihe ọrụ ọfịs na drawer na-adị ire ụtọ, nke na-efegharị na slides na-agba bọl maka nnweta ọdịnaya dị mfe.
Nwee ọdịdị ọhụụ nke oge a na-adịte aka n'ihi ihe na-adịgide adịgide, nke na-enyere aka igbochi Nick. a obere ọcha oche nwere a dịkọrọ ndụ anya ị ga-n'anya maka afọ na-abịa.
Anyị na-enye ntuziaka ntuziaka ga-enyere gị aka ịtọlite ​​tebụl ụlọ ọrụ a ngwa ngwa na ịdị mfe.
Nke gara aga: Tebụl kọmpụta kọmpụ nke oge a maka ọfịs ụlọ na drawer 1, 2 mepere emepe, 1 obere shelf
Osote: Tebụl kọmputa nke oge a maka ọfịs ụlọ
Kọmputa oche YF-GD003